LG G Pad 5 mbadamba ga-abịa na Snapdragon 821 | Gam akporosis
LG na-akwado njikere ịkwalite mbadamba ihe eji akọ ọhụụ na ahịa. The South Korea ụlọ ọrụ na-enyocha ihe ikpeazụ nkọwa na-akwadebe ala na-ewetara ndị G Kedo akwa 5, dị ka onye otu ọnụ ụzọ XDA-Mmepe dị na akwụkwọ ọhụụ ọhụrụ.
Ngwaọrụ a, ọ bụ ezie na ọ ga-abata dị ka nke ga-asọmpi ndị ọzọ nke otu klas ya, ga-nzọ na Snapdragon 821, a SoC nke a mara ọkwa site na Qualcomm maka ihe karịrị afọ atọ, nke bụ ihe na-atọ ụtọ ma dịkwa ntakịrị, n'ihi na ọ bụghị ihe anyị tụrụ anya ya, na obere oge taa ndị nrụpụta na-anwa ịhọrọ chipsets kachasị ọhụrụ maka ịkwadebe ha na ọdụ ha; LG bụ otu n'ime ha, mana ọ dị ka ọ ga-etinye ihe ọzọ na mbadamba nkume a.
Ejiri Snapdragon 2016 nwee ọtụtụ smartphones nke 821. Ihe nhazi a nwere ihe anọ, nke bụ Kyro. Na ajụjụ, abụọ n’ime ha ka atọrọ ka ha nye 2.34 GHz ugboro abụọ, ebe ndị ọzọ fọdụrụ ga-anọ na ọsọ elekere nke 2.19 GHz.
Ekwuru na G Pad 5 ga - ejikọ yana a 4 GB Ram na 32 GB ohere nchekwa. N'ihi na ROM dị mkpụmkpụ, ọ nwere ike ịkwalite mgbasa site na iji kaadi microSD. N'oge ahụ, enweghị nkwenye nke nsụgharị ebe nchekwa ndị ọzọ. Anyị ga-echere ka e mee ya ka ọ mara ọkwa na njirimara niile na nkọwa nke mbadamba smart a, nke enwere ike ịnye n'ụdị dị iche iche.
LG G8X ThinQ: Onye nọchiri LG G8 bụ ọrụ
Akụkọ ndị gara aga na-egosi nke ahụ o nwekwara ihe ngosi 10.1 nke anụ ọhịa FullHD + na mkpebi 1,920 x 1,200 na akụkụ akụkụ 16:10, yana nyocha akara mkpịsị aka na gam akporo 9 Pie nke arụnyere na LG UX dị ka akwa nhazi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » LG na-akwadebe mwepụta nke mbadamba G Pad 5 ọhụrụ ya na ihe nhazi ochie
Xiaomi na-ewebata onye mgba ọkụ iji zoo mgbasa ozi na MIUI